दीपेन्द्र र देवयानीको लन्डनमा पहिलो डेटिङ, अनि देवयानीले दिएको त्यो महँगो उपहार ! – KhabarTime
दीपेन्द्र र देवयानीको लन्डनमा पहिलो डेटिङ, अनि देवयानीले दिएको त्यो महँगो उपहार !
दीपेन्द्रले चार्ल्स एवं शेलीकै बीचमा त्यो दिन देवयानीलाई ठट्टैठट्टामा भने रे, ‘तिमी त नेपालकी बडामहारानी हुन लायक रहिछौ नि यार ।’ यसरी त्यो दिनदेखि सुरु भयो दीपेन्द्र र देवयानीबीचको प्रेमको सिलसिला । देवयानीको युवराजसँग प्रेम छ भन्ने जानकारी राजारानीले पाए पनि देवयानीका मातापिता पशुपतिशमशेर र उषाराजे सिन्धिया राणा २०५३ सम्म अनभिज्ञ थिए । यही अवधिमा दीपेन्द्रको सुप्रिया शाहसँग पनि ‘अफेयर्स’ चलिरहेको थियो, जो मुमा बडामहारानी रत्नकी दिदीकी नातिनी थिइन् ।
इश्वर पोखरेल भन्छन्, ‘माधव नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष मान्दैनौं’